သင်က သင့်ကုမ္ပဏီက လူကြီးတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ ခရီးသွားစရာရှိတိုင်း စီစဉ်ပေးနေရတဲ့ သူလား?? ဒါဆိုရင် ဒီစာလေးကို အဆုံးထိဖတ်ကြည်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…
ဒါဆိုရင် ဒီစာလေးကို အဆုံးထိဖတ်ကြည်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…
ကိုယ့်ရုံးက ဒါရိုက်တာတွေ၊ Management Level လူကြီးတွေကနေစလို့ အခြားဝန်ထမ်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ ခရီးသွားစရာရှိတိုင်း လိုအပ်တဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ကားလက်မှတ်၊ ဗီဇာ၊ ဟိုတယ် Booking စတာတွေကို စီစဉ်ပေးရတာ အလုပ်ရှုပ်သလို တစ်ခုခုလွဲသွားရင်ပြဿနာတက်နိုင်တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုလည်းအင်မတန်များပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကို သာသာယာယာနဲ့ အမှားအယွင်းမရှိလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုခု မရှိတော့ဘူးလား?
အဖြေကတော့၊ ဟုတ်ကဲ့။ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲဆိုတော့ မြန်ဆန်တိကျစိတ်ရှည်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အပ်လိုက်ဖို့ပါ။
ဒါတော့သိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုစိတ်ချရတဲ့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမျိုး ဘယ်လိုရှာရမလဲ...
ပြီးတော့ ဝန်ဆောင်ခပေးရမှာဆိုတော့ အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာမှာပေါ့လို့ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်။
ဒီအတွက် လမ်းညွှန်ပေးချင်တာကတော့ Beautiful Myanmar Diary (BMD) Travel & Tours ကုမ္ပဏီပါပဲ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီကုမ္ပဏီက လက်ရှိမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်
အတွေ့အကြုံ အရည်အချင်း အပြည့်အဝရှိလို့ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ စိတ်ချရတဲ့အပြင် Special Corporate Rate နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကြောင့် ဈေးနှုန်းပါ ယုံကြည်စိတ်ချရလို့ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှာလည်း ပူစရာ မလိုလို့ပါ။
BMD Travel ကနေပြီး -
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်များ
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဟိုတယ်အခန်းများ
သီးသန့်ကားစီးလုံးငှား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း (လေဆိပ်အကြိုအပို့ / မြို့တွင်း မြို့ပြင် / လချုပ် / နှစ်ချုပ်)
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ
Staff Annual Trip များအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပအထူးခရီးစဉ်များ
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများနှင့် ဖောက်သည်တော်ကြီးများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ အထူးခရီးစဉ်များ
ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပလေ့လာရေးခရီးစဉ်များ
Meeting, Incentive, Conference, Exhibition များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
တွေကို ရုံးတွင်းခရီးသွားလာရေးဌာနနဲ့မခြား အကောင်းဆုံး၊ အတိကျဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို Services တွေကို အထူးဝန်ဆောင်မှု နှင့် Special Corporate Rate တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ရုံးအထိသွားပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနေစရာမလိုပါဘူး။
ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်လိုက်ရုံနဲ့ သင့်ရုံးအရောက် BMD Travel က လာရောက်ဆွေးနွေးပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
BMD Travel ကို ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေက -
၀၁ - ၅၃၀၆၅၃၊ ၀၉ ၄၅၇၈ ၀၀၀၁၁ ၊ ၀၉ ၄၅၇၈၀၀၀၂၂ ၊ ၀၉ ၄၅၇၈၀၀၀၃၃ ဖြစ်ပြီး
Email တွေကတော့ - info@bmdtravels.com, sales@bmdtravels.com, sales1@bmdtravels.com တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
BMD ရဲ့ အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ခရီးစဉ်တွေအကြောင်းအမြဲတမ်း Up To Date သိနေဖို့နဲ့လိုအပ်ရင် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် BMD Travel ရဲ့ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာကိုလည်း ဒီလင့်ခ် => https://www.facebook.com/bmdtours.ticketing/ ကနေသွားပြီး Like လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။
ရုံးကိုလူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ BMD ရဲ့လိပ်စာက -
အမှတ် (S-39) ၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ ရွှေသရဖီအိမ်ယာ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။